DEG DEG+DAAWO: Somaliland oo Ciidankii ugu badnaa geysay Gobolada Sool & Sanaag & amar lagu bixiyay in la soo qabto saraakiishii ka goosatay – Puntlandtimes
June 6, 2019 Shiine Ali
Saacadihii la soo dhaafay ayaa waxaa degaano ka tirsan gobolada Sool iyo Sanaag gaaray Ciidamo ka tirsan kuwa Somaliland,waxaana la sheegay in ciidankaan ay fulin doonaan Amar kasoo baxay Somaliland oo ahaa soo qabashadda Saraakiishii ku biirtay maamulka Puntland.
Wararka la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamo wata gaadiidka dagaalka ay tageen degaanada,Yubbe, Hadaaftimo,Damal-xagarre iyo deegaano kale,waxaana ay kusi jeeddaan degaanadii dhawaan ay Ciidanka goostay ay ku sugnaayeen.
Qaar ka mid ah dadka degaanadaasi ayaa waxaa ay sheegeen in Ciidamadaas ay yihiin kuwo hor leh, ayna ka cabsi qabaan dagaal dhexmara Puntland iyo Somaliland.
Ciidamada ayaa dhaq dhaqaaqyo ka wada degaanada Yubbe Hadaaftimo iyo Damal-xagarre ,waxaana dadka deegaanadaas ay sheegeen inay ka cabsi qabaan in lagu dagaalamo dushooda,isla markaana ay khasaaro kasoo gaarto.
Kkkkk anigo Ahmed mooye waxa ku qosalaha niman yaho hal mid aya adunka ugu yabey walikin ma argdan madaxweyn afkisa urayo wa muuse tuug hadu agtada so fadhisdo matag ba ku walanah anigo Ahmed mooye leydhaho marka hore waxa usheygayh afkada urayo iska so dhaq markas dadka u imo muuse tuug waxa isku darsadey tuugnimo dad isku dir waxa qarxis ba isku darsadey muuse tuug adunka wa lagu ogyhy inad shabab tahy muuse tuug ciidanka dhaheysid hala so qabdo hooyada iyo jeeganta qamris tiyasha alshababka tahy warkas ushg anaga warkas hano shekin warkas muuse tuug hooyada jeeganta warkas u shg muuse tuug reer somaliland iyo shacabkada wa cabeysy waxa kucabysy tuug ba tahy dadka ba isku dirdah muuse tuug xilika inad iska dhibdi aya kuficn ok anigo Ahmed mooye intas aya hadaleyga ugu baxey bye reer somaliland iyo shacabkada ninkan muuse tuug iska qabta hada iska qabani walikin dhibka wa kujireysani hada laga bilabo guma daharad sacan la jog ok bye
Muuse laga baqay says:
Astaqfuranlaah Axmed mooyi ma handhikab xaga maskaxda ah baa, wuxuu ku hadaaqay ee uu soo qoray ma ogyahay.
Wax curaysa kuma hayaan somaliland bowe is degi oo wax aanad ahayn hayso qaadan after all you are only halamash
Kkkkkk maya ahmed moye hadhikab maha ee wu niyad jabay waxu arkaya puntland oo malunba meel laga qabsano hhhhh wu dawakhay ahmed moye waliba sug malmo aad tos uu walatide